Tag: soo jeedinta iibka | Martech Zone
Tag: soo jeedinta iibka
Samee Soo-jeedinno Calaamadeysan oo u qurux badan sida Websaydhkaaga
Jimco, Abriil 4, 2014 Jimco, Abriil 4, 2014 Douglas Karr
Waxaan dhawaan dib u aqrinay soo jeedin iyo qandaraas shirkad laheyd sumcad xumo. Dukumiintiyadu waxay ahaayeen musiibo, in kastoo. Xuduudaha ayaa ka dheeraaday meelaheena daabacaada, waxay ku yimaadeen laba qaybood (laba shaqooyin daabacan, laba saxiix) waana inaan daabaco, saxeexo, iskaan iyo iimayl soo jeedinta la saxeexday dib. Kaba sii darane waxaas oo dhan, soo jeedintu way adkeyd in la aqriyo oo si xun ayaa loo qoraa, waxay iga baahan tahay in aan u leexo raadinta, wax ka beddelo, oo aan horay iyo dib u socdo
Istaraatijiyadaha suuq-geynta waxaa badanaa loogu talagalay in lagu helo raadad badan ama murugo macaamiisha hadda jirta. Mid ka mid ah arrimaha aan inta badan ka helno macaamiisha ayaa ah inay inta badan ka shaqeeyaan dhamaadka khaldan ee masafka iibka. Shirkado badan ayaa soo booqdayaashu ka yaryihiin bishii degelkooda intay doonayeen… laakiin hadday awoodaan inay laba jibbaaraan tirada booqdayaashaas ay haystaan, aad bay u guuleysan lahaayeen. Farsamooyin badan oo aan la shaqeyno
Ku dhawaad ​​toddobaad ka hor, DK New Media waxay ku darsatay TinderBox, Xalka Maareynta Soo-jeedinta, liiskeeda macaamiisha sii kordheysa. Waxaan wax ka qoray TinderBox markii ugu horreysay ee ay bilaabeen… iyo wax yar ka dib markii aan noqonnay macmiil iyaga ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan is caawino sababtoo ah awooda cajiibka ah ee xalkeedu leeyahay. Codsiga TinderBox waa mid cajiib ah oo saacado ayuu igu keydsaday. Asal ahaan, waxaan soo saaray keyd maaddo leh dhammaan badeecada